သိကြားမင်းက နေ့စဉ် ရှိခိုးရသည့် လူ (၄) ဦး – Myanmar Magazine
February 14, 2019 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
သိကြားမင်းက အောက်ပါ အကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံသူများကို နေ့စဉ် ရှိခိုးလေ့ ရှိပါတယ်-
၁။ ကြာမြင့်စွာကာလကထဲက မြတ်သော အကျင့်ရှိကြတဲ့ ရဟန်းသူတော်စင်များ။
၂။ ပရဟိတ စိတ်ရှိပြီး ဒါနဝတ်ရှိတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။
၃။ ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါး စသည်အားဖြင့် အကျင့်သီလ ရှိကြတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။
၄။ တရားသဖြင့် ရှာဖွေပြီး သား မယားကို ပြုစုသူများ။ (လင့်ဝတ်၊ မယားဝတ်၊ သားသမီးဝတ်၊ မိဘဝတ်၊ ကျေပွန်သူများ) မိသားစုဘဝလေးကို စင်စင်ကြယ်ကြယ်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သူကို သိကြားမင်း ရှိခိုးသတဲ့။
အပြင်ထွက်လျှင် မိဘကို ရှိခိုးသွားသင့်
သိကြားမင်းက သူ၏နေရာ ဘုံဗိမာန်ကနေ အပြင်ထွက်တိုင်း ထွက်တိုင်းမှာ ရှိခိုးသင့်တဲ့သူတွေကို ရှိခိုးလေ့ရှိသတဲ့၊ ယနေ့ ခေတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာထက် ဘာသာစိတ် အသိစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် ပိုမှန်မည်ထင်သည်၊ သူတို့တတွေဟာ ကျောင်းကိုပဲ သွားသွား၊ သင်တန်းကိုပဲ သွားသွား၊ အလုပ်ကိုပဲ သွားသွား၊ ခရီးကိုပဲ သွားသွား၊ ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်ပြီဆိုရင် ဘုရားခန်းက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရယ်၊ အမေ အဖေတို့ကိုပါ ကျကျနန ရှိခိုးပြီးမှ သွားလေ့ရှိသည်။
သိကြားမင်းသည်လည်း ထိုနည်းတူစွာပင် ဗုဒ္ဓ၏တပည့်ကောင်းများနည်းတူ အပြင်ထွက်ခါနီး လက်အုပ် ချီ ရှိခိုးလေ့ရှိသည်၊ ထိုသို့ရှိခိုးနေတာကို မြင်တော့ တပည့်ဖြစ်သူ မာတလိ နတ်သားက “အရှင်သိကြားမင်းကြီး၊ အရှင်မင်းကြီးက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အကြောင်းကြောင့် ရှိခိုးနေတာလဲ၊ တကယ်ဆို မြေပြင်ရှိ ဝိဇ္ဇာသုံးပါး အဘိဉာဏ်များရရှိပြီးသူများနှင့် ရေမြေတောတောင်ကို အစိုးရတဲ့ ဘုရင်တွေက အရှင်နတ်မင်းကြီးကို ရှိခိုးကြရပါတယ်။ ဝေဟင်ပြင်ရှိ နတ်မင်းကြီး လေးယောက်နှင့် နတ်အပေါင်းတို့ကို အစိုးရသော တာဝတိံသာ နတ်မင်းတို့ကပါ အရှင်နတ်မင်းကြီးကို ရိုသေပေးကြရတယ်၊ ရှိခိုးကြရတယ် မဟုတ်လား”ဟု မေးတော့ သိကြားမင်းက “ငါ ရှိခိုးနေတဲ့သူတွေက တခြားမဟုတ်ဘူးရဟန်းသူတော်စင် လူ သူတော်စင်များ ဖြစ်ကြတယ်”ဟု အထက်ပါ အရှိခိုးခံထိုက်သူများကို စာရင်းလုပ် ထုတ်ပြလေသည်။
– ကိုယ့်သား ကိုယ့်မယားကို သမ္မာအာဇီဝဖြင့် ပြုစုလုပ်ကျွေးနေချိန်၊ ကိုယ့် အမိအဖကို ပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့အချိန်သည် ကောင်းကင်း သိကြားမင်း၏ ရှိခိုးမှုကိုခံ ထိုက်နေသူဟု၍မှတ်။
– ငါးပါးသီလ လုံတဲ့နေ့သည် သိကြားမင်း၏ ရှိခိုးခြင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး ထိုက်နေတဲ့ အချိန်ဟူ၍မှတ်။
– ပေးကမ်းနေ တဲ့အချိန်၊ စွန့်ကြဲနေတဲ့အ ချိန်၊ အလှူဒါန ပြုနေတဲ့အချိန်တိုင်းသည်လည်း သိကြားမင်း ရှိခိုးခြင်းကို ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ဟူ၍မှတ်ကြရန် သိကြားမင်းပြော သည်။
( သံယုတ်ပါဠိတော်၊ ပဌမတွဲ၊ သက္ကသံယုတ်၊ဒုတိယဝဂ္ဂ၊ ၈- ခုမြောက်၊ ဂဟဋ္ဌဝန္ဒနာသုတ်၊ပုဒ်ရေနံပါတ်- ၂၆၃၊စာမျက်နှာ ၂၃၅ – မှ ၂၃၆ ထိ )ကိုးကား၍ ရေးသားပါသည်…။
ထိုကဲ့သို့သော အလုပ်မျိုးကို သိကြားမင်းရှိခိုးခံထိုက်ရုံသာ မက၊ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့ကပါ ချီးမွးမ်းထောမနာပြုကြသည်၊အယုံအကြည်ရှိကြ သည်၊ မြတ်နိုးကြသည်၊ ပူဇော်ကြသည်။ဖြစ်လေရာရာ ဘဝတိုင်းမှာလဲ ထိုသူပြုအပ်သော အလုပ်တွေကပဲ ပြန်လည် ကြိုဆိုကြပါလိမ့်မည်။ သိကြားမင်းနှင့် သူတော်ကောင်းများ အရိုအသေပေးထိုက်သော ထိုအလုပ်များ ကို ပြုလုပ်ထားသူသည်လည်း လက်ရှိဘဝမှာလဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ချမ်းသာစွာ နေရသလို ဘဝတိုင်းမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေကြပါလိမ့်မည်။ကိုယ်လုပ်ခဲ့သော အလုပ်ကို တွေးမိလေးတိုင်းလဲ ပီတိတွေ လှိုင်လှိုင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။
← အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေနဲ့ မွေးဖွားခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ် (ရုပ်သံ)
သင်္ကန်းဝတ်​နှင့်​သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​မှု ဖြစ်​ပွား →
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ပြသနာတွေကို သူ့ဆရာဆီမှာ ရင်ဖွင့်ပါတယ်….
March 4, 2019 myanmarmagazine Comments Off on အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ပြသနာတွေကို သူ့ဆရာဆီမှာ ရင်ဖွင့်ပါတယ်….
November 30, 2018 myanmarmagazine Comments Off on လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့..။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ)